घनास्त्रता मानव जीवन खतरनाक हो कि गम्भीर रोगहरु को विकास गर्न जान्छ। वस्तुतः जोखिममा छन् सबै विरामीहरु, रोग रोकथाम रूपमा acetylsalicylic एसिड को आधार मा लागूऔषधको प्रशासन देखाउँछ। Antiplatelet कार्य र दबाइ "Thrombotic एसीसी" छ। यसलाई गैर-steroidal विरोधी भडकाऊ लागूऔषधको एक समूह पर्छ। सङ्केत गर्छ "Thrombotic एसीसी", सिफारिस औषधिको खुराक र उपचार खुराक निर्माता निर्देशन मा विस्तृत वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ उपचार सुरु गर्नु अघि यो जानकारी परिचित हुनुपर्छ।
तयारीको को सामान्य विवरण
"Thrombotic एसीसी" एक प्रतिनिधि nonsteroidal विरोधी-भडकाऊ दबाइहरु छ। यी औषधिहरू सामान्यतया धेरै रोग अवस्था सँगसँगै छ जो सुनिंनु, को लक्षण कम। NSAIDs को लोकप्रियता भए तापनि सावधानीपूर्वक लागू गर्नुपर्छ। यस्तो उपचार गम्भीर साइड इफेक्ट हुन सक्छ।
"Thrombotic एसीसी" अक्सर हृदय विकार को उपचार को लागि निर्धारित छ। दबाइ एक अष्ट्रीया औषधि कम्पनी "जीएल फार्मा GmbH" उत्पादन गर्छ। को एजेन्ट को मुख्य प्रभाव कम मा निर्देशित छ प्लेटलेट एकत्रीकरण, रगत थक्के को कमी, सुनिंनु र analgesia हटाउन।
"Thrombotic एसीसी": संरचना र संगठन
दबाइ आवेदन गर्नु अघि रोगी अप बनाउन घटक संग familiarize बाध्य छ। मुख्य सक्रिय संघटक - acetylsalicylic एसिड, लोकप्रिय एस्पिरिन रूपमा ज्ञात। "Thrombotic एसीसी", पाटी को रूप मा जारी छ एक विशेष कोटिंग संग लेपित फिलिम। यो acetylsalicylic एसिड को नकारात्मक प्रभाव देखि पेट को श्लेम लाग्एको अस्तर को सुरक्षा सुनिश्चित र केवल आन्द्रा घुल। एक यस्तो ट्याबलेट सक्रिय संघटक को 50, 75 वा 100 मिलीग्राम समावेश गर्दछ।
colloidal सिलिका प्रयोग सहायक घटक, lactose monohydrate, आलु स्टार्च, microcrystalline सेलूलोज रूपमा।
कार्य को संयन्त्र
Acetylsalicylic एसिड लामो चिकित्सा ज्ञात र विभिन्न तयारी को उत्पादन को लागि प्रयोग गरिएको छ। कारण सामाग्री गर्न विरोधी भडकाऊ प्रभाव कक्स-1 (cyclooxygenase इन्जाइम) को छनौट रोकावट कार्य प्रदान गर्दछ। को भडकाऊ प्रक्रिया को विकास प्रकुपित कि पदार्थ - यो thromboxane, prostaglandins र prostacyclins को संश्लेषण लाइ रोक्छ। नयाँ इन्जाइम platelets छैन, antiplatelet प्रभाव अनुमति आफ्नो आसंजन को कमी गर्न धेरै हदसम्म कारण थियो सक्छ गठन। यो सानो खुराक मा चिकित्सा लिन अनुमति दिन्छ।
एस्पिरिन यसको fibrinolytic गतिविधि बढाने, रगत coagulation रोक्छ। पदार्थ पनि analgesic र antipyretic प्रभाव प्रदान गर्दछ।
"Thrombotic एसीसी" निर्देशन परिषद निम्न रोगहरु नियुक्त:
जहाजहरु मा सर्जरी पछि thromboembolism को रोकथाम;
गहिरो नसाहरु मा thrombus गठन को रोकथाम;
को मस्तिष्क स्ट्रोक को प्राथमिक र माध्यमिक रोकथाम;
क्षणिक ischemic आक्रमण को रोकथाम;
पुरानो शिरापरक अपर्याप्तता;
myocardial infarction को प्राथमिक र माध्यमिक रोकथाम;
साथै, acetylsalicylic एसिड आधारमा दबाइ सबै वृद्ध मान्छे लिन सिफारिस गरिएको छ। प्रयोग गर्नुहोस् "Thrombotic एसीसी" को लागि सङ्केत गर्छ मुख्य रूप हृदय pathologies को रोकथाम गर्न सम्बन्धित छन्। कारण थोरै सामग्री एउटा लामो acetylsalicylic एसिड ट्याब्लेटको लाग्न सक्छ। दबाइ को उपचार खुराक र खुराक विशेषज्ञ द्वारा कटिबद्ध हुनुपर्छ।
मार्गदर्शन कसरी लिन विस्तार वर्णन "Thrombotic एसीसी।" निर्माता कडा खानाको अघि ट्याब्लेटको पिउन सुझाव, तर खाली पेट मा। यो साइड इफेक्ट को जोखिम कम गर्न मद्दत गर्नेछ। पनि ट्याब्लेटको पानी प्रशस्त तल धोए, चपाउनु वा भाग छैन।
दबाइ को औषधिको खुराक
यो केवल एक डाक्टर गैर-steroidal विरोधी भडकाऊ एजेन्ट को उपचार को लागि सल्लाह दिन्छन् गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुपर्छ "Thrombotic एसीसी।" को दवादारू को औषधिको खुराक रोगी गरेको निदान निर्भर हुनेछ। स्ट्रोक र हृदय आक्रमण को prophylaxis रूपमा ट्याब्लेटको एक लामो समय को लागि लग्नु गर्नुपर्छ। दैनिक औषधिको खुराक - 50-100 मिलीग्राम (प्रति दिन एक वा दुई पाटी)। एउटै खुराक एनजाइना को रोकथाम लागि संकेत छ। खतरा बारम्बार क्षणिक विरामी ischemic आक्रमण प्रति दिन एस्पिरिन को 75-300 मिलीग्राम लिन सिफारिस गरिएको।
को लागि जोखिम मा पल्मोनरी embolism वा गहिरो नस दबाइ को औषधिको खुराक वृद्धि "Thrombotic एसीसी।" 100 मिलीग्राम - यी विरामीहरु सक्रिय पदार्थ को न्यूनतम खुराक छ। यसको सङ्केत गर्छ द्वारा प्रति दिन 200 मिलीग्राम वृद्धि गर्न सकिन्छ। को चिकित्सा साथ अन्य औषधीको NSAIDs को समूह देखि संग छैन लग्नु गर्नुपर्छ। चिकित्सा को अवधि व्यक्तिगत निर्धारण गरिन्छ।
केही अवस्थामा यो दबाइ लिन निषेध गरिएको छ?
एस्पिरिन को गुण thinning साँच्चै केही अवस्थामा महत्त्वपूर्ण छ। तर अर्कोतर्फ, यो रोगी निम्न रोगहरु कम्तिमा एक नभएसम्म जीवन एउटा गम्भीर खतरा को चिकित्सकीय प्रभाव छ:
erosions र जठरांत्रिय पर्चा को अल्सर;
16 वर्ष मुनिका उमेर;
acetylsalicylic एसिड को घृणाको;
तीव्र गुर्दे वा hepatic विफलता;
lactose घृणाको ;
अन्य NSAIDs गर्न घृणाको;
आवर्तक घास ज्वरो अस्थमा र एस्पिरिन घृणाको संग संयुक्त।
दबाइ महिनावारी समयमा रगत विशाल हानि भोगिरहेका छन् जो महिलाहरु स्वीकार गर्न निषेध गरिएको छ। पुरानो श्वसन रोगहरु को इतिहास भएका विरामीहरु गर्न निर्धारित चरम सावधानी चक्की संग।
गर्भावस्था को समयमा दबाइ लिइरहेको
को अध्ययन महिनामा दबाइ जन्मजात र स्वागत "Thrombotic एसीसी" बीच सम्बन्ध ascertained गरिएको छैन। तथापि, विशेषज्ञहरु पहिलो र तेस्रो trimester मा चक्की लिएर छुँदै नछुने गर्न सुझाव दिन्छौं। यो अपवाद आमाको अपेक्षित लाभ जन्म दोष को जोखिम भन्दा ठूलो छ जसमा अवस्थामा छन्। रगत expectant आमा केवल चिकित्सक thinning लागि चिकित्सा नियुक्त।
आवश्यक छ भने, दबाइ वितरण पछि नियुक्त गर्न सकिन्छ। acetylsalicylic एसिड को एक सानो खुराक मा ट्याब्लेटको "Thrombotic एसीसी" (50 मिलीग्राम), lactation कुनै प्रतिकूल प्रभाव समावेश गर्यो। तपाईं दीर्घकालीन उपचार गर्न आवश्यक छ भने रद्द वा स्तनपान अवरोध गर्नुपर्छ।
लागूऔषधको अनुप्रयोगको सुविधाहरू
Inhibiting गुण सर्जरी समयमा वा रिकभरी समयमा रक्तस्राव सक्छ जो केही दिन, को लागि कायम छन्। तसर्थ, सर्जरी अघि चक्की लिएर नगर्न गर्नुपर्छ।
"Methotrexate" र "Thrombotic एसीसी" लिइरहेको बेला hematopoiesis छेउमा एकदम साइड इफेक्ट को खतरा बढ्छ देखि (दबाइ को मूल्य सक्रिय संघटक को औषधिको खुराक मा निर्भर छ)। उच्च-खुराक acetylsalicylic एसिड hypoglycemic कार्य छ। यो मधुमेह र मौखिक प्रयोगको लागि इन्सुलिन gipoglikimicheskie लागूपदार्थ प्राप्त संग विरामीहरु लागि छलफल गर्नुपर्छ।
एस्पिरिन संग ibuprofen संयोजन छैन। पहिलो को cardioprotective जो हृदय रोग संग विरामीहरु गम्भीर परिणाम हुन सक्छ, एस्पिरिन को प्रभाव मा नकारात्मक प्रभाव छ।
गाउट गर्न predisposed गरिएको छ जो व्यक्ति, तपाईं acetylsalicylic एसिड आधारित उत्पादनहरु हुँदैन। "Thrombotic एसीसी" (ट्याब्लेट) निर्देशन anticoagulants, antiplatelet र thrombolytic लागूपदार्थ संग साथ लिन सल्लाह गर्दैन। यो उपचार रक्तस्राव को जोखिम बढ्छ।
साथ उपचार मा valproic एसिड संग, एस्पिरिन यसको विषाक्त प्रभाव बढ्छ। जठरांत्रिय रक्तस्राव रोक्न corticosteroids संग संयोजन मा "Thrombotic एसीसी" लिने छैन।
नयाँ दबाइ को नियुक्ति मा पहिलो रोगी अध्ययन - सङ्केत गर्छ। "Thrombotic एसीसी" दबाइ, यसको सबै सकारात्मक गुणहरू बावजुद, गलत प्रविधी संग सम्बन्धित गम्भीर परिणाम छ किनभने, केवल एक डाक्टर को सल्लाह लिएको हुनुपर्छ।
को दवादारू साधारण तरिकाले सहन मात्र दुर्लभ अवस्थामा, साइड इफेक्ट रेकर्ड छन्। को जठरांत्रिय पर्चा यस्तो epigastric दुखाइ, ईर्ष्या, घृणा, उल्टी, पाचन पर्चा को श्लेम लाग्एको झिल्ली को ulcerative lesion रूपमा उल्लंघन हुन सक्छ को भाग मा।
acetylsalicylic एसिड प्रयोग नाक रक्तस्राव, को जठरांत्रिय पर्चा को रक्तस्राव को विकास संग fraught छ। उच्च रक्तचाप संग विरामीहरु मा मस्तिष्क रक्तस्राव हुन सक्छ।
रक्तस्राव गर्न फलाम कमी रक्तअल्पता (तीव्र वा पुरानो) निम्त्याउन सक्छ। रोग अवस्था सामान्यतया प्रयोगशाला अनुसन्धान को रगत पत्ता छ। विशिष्ट लक्षण हो: पीला छाला, कमजोरी, चक्कर आना, asthenia।
acetylsalicylic एसिड गर्न अतिसंवेदनशीलता वा घृणाको यस्तो urticaria, छाला राता, खुजली, सुनिंनु रूपमा एलर्जी प्रतिक्रिया सक्छ भने। गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया - anaphylactic आघात, bronchospasm, angioedema - अत्यन्तै दुर्लभ छन्।
दबाइ अधिमात्रा असम्भाव्य विषयमा सिफारिसहरू अनुपालन मा। को खुराक को स्वीकार उपाय भन्दा धेरै उच्च छ भने, यस्तो कर्णक्ष्वेड, वाकवाकी, चक्कर आना, उल्टी, अन्योल रूपमा लक्षण हुन सक्छ। बुढेसकालमा, एस्पिरिन को अधिमात्रा गम्भीर परिणाम हुन सक्छ।
जब अधिमात्रा को लक्षण रोगी hospitalized गर्नुपर्छ। पानी र इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स पुनर्स्थापना, बाध्य alkaline diuresis, गैस्ट्रिक lavage: अस्पतालमा सञ्चालन आपतकालीन उपचार गरिनेछ।
के दबाइ प्रतिस्थापन गर्न सक्छ?
दवादारू "Thrombotic एसीसी" यदि आवश्यक प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ। Analogues, जो को मूल्य धन को मूल लागत देखि अलि फरक छ, आफ्नै विशेष आवेदन छ। तसर्थ, दबाइ चिकित्सकको परामर्श बिना परिवर्तन गर्नुपर्छ। यस्तै संरचना र चिकित्सकीय प्रभाव निम्न दबाइहरु छ:
धेरै विरामीहरु भनेर सामान्य एस्पिरिन प्रतिस्थापन गर्न सक्छ मतलब लाग्छ। वास्तवमा यो सत्य हो। "Thrombotic एसीसी" (प्रति एकाइ मूल्य 60 rubles छ।) एक साधारण एस्पिरिन ट्याब्लेटको रूपमा पेट र intestines को श्लेम लाग्एको झिल्ली मा एक कम हानिकारक असर। विशेष सुरक्षा म्यान एकदम acetylsalicylic एसिड को क्रोध उत्पन्न प्रभाव कम गर्छ।
औषधि "Thrombotic एसीसी" सकारात्मक समीक्षा हृदय विकार को उपचार वा रोकथाम लागि यो लिए जो विरामीहरु देखि कमाए। यस ट्याब्लेटको को जठरांत्रिय पर्चा गर्न क्षति बिना लामो समय को लागि सकिन्छ। यो औषधिको खुराक खुराक नियुक्त विशेषज्ञ ब्रेक सिफारिस गरिएको छैन। साइड इफेक्ट को कुनै अवस्थामा धेरै शायद रिपोर्ट।
लागि प्रयोग "Kanamycin" निर्देशनहरू। सङ्केत गर्छ, दबाइ विवरण, समीक्षा
"Azelik" (क्रीम): प्रयोग, वर्णन, संरचना र समीक्षा लागि निर्देशन
साधारण चिसो को छुटकारा हुँदै। बच्चाहरु नुनखरा नाक धुन रूपमा?
डायरी कसरी प्रयोग गर्ने? आफ्नै हातले असामान्य डायरीहरू कसरी बनाउने?
कसरी आफ्नो कम्प्युटर "Maynkraft" मा स्थापना गर्न? संग र बिना मोड सेट
एक जड-ठीक के छ?
XVIII - उमेर के हो? को 18 औं शताब्दीमा युरोप
सेक्स र मानिसहरू बारेमा रोचक तथ्य। यौनबारे 10 रोचक तथ्य
भूमि व्यवस्था को स्रोत